Khabiirka Cimilada wuxuu qeexayaa 4 Noocyada goobaha WordPress
Ka helitaanka joogitaankaaga internetka ayaa kaa caawin kara astaantaada inaad dareento dhab ah waxayna kordhineysaa qiimaha iyo sumcada ka hor inta aan macquul aheyn macaamiisha. Haddii aad tahay qof ku shaqeeya howlaha ugaarsiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hesho heerka guusha aad u saraysa taas oo suurtogal ah in la galo faylalka. Waa ammaan in la yiraahdo WordPress waa xal ugu fiican oo ugu fudud ee dhibaatooyinkaaga oo dhan internetka. Haddii aad rabto inaad ka dhigto joogitaankaaga internetka, WordPress wuxuu u dhaqmi doonaa sidii midka dhismaha dhismaha wuxuuna ka caawin doonaa inuu abuuro waxyaabo ka soo baxa bogagga sahlan ee bogaga internetka.
Oliver King, oo ah khibrad hormuud u ah Semmat , wuxuu eegaa 4 nooc oo asaasi ah oo aad si fudud ugu dhisi kartid WordPress iyo qalabyo kaa caawin doona inaad sameyso goob fiican oo aad u fiican marnaba - los gatos computer repair. 10)
1. Websaydhka eCommerce
House of Whiskey waa goobta iibisa Scottish Whisky, waxaana lagu dhisay WordPress. Goobo isku mid ah oo e-ganacsi oo isku mid ah ayaa ka yimid sababtoo ah WordPress. Haddii aad haysato shirkad Amazon ah oo aad rabto in aad aduunka u sheegto, Wordpress waa xulashada ugu fiican ee adiga kugu habboon adigoo ka caawinaya inaad gaarto dad badan. Amazon waa shirkad internet ah oo runtii ah oo la kiciyay oo aan lahayn wax kale oo aan ahayn WooCommerce, iyo naqshadiisu waxay ku saleysan tahay mawduuca gaarka ah ee Divi WordPress. WooCommerce waa dhab ahaan plugin by Automattic, iyo waxa uu leeyahay culeyska dukaanka. Qalabkani wuxuu ka jiraa WordPress-kaaga waxaana lagu dhejin karaa waqti aan lahayn. Waxay leedahay qaabab kala duwan oo kala duwan, labadaba lacag iyo lacag la'aan. Wax kale oo aad isku dayi karto waa Easy Downloads iyo iThemes Exchange..Waxay kaa caawineysaa inaad sameyso dukaanka online adiga oo isticmaalaya xisaabta WordPress. Waa inaadan ilaawin inaad awood u yeelato WooCommerce si aad u hesho siyaabo badan iyo doorashooyin.
2. Website-yada Ganacsiga
Haddii aad rabto shirkad heer sare ah ama goob ganacsi sida Mercedes-Benz, WordPress waa doorashada saxda ah. Shirkadda wax soo saarka baabuurta waxay u dooratay WordPress waxayna noqotay mid ka mid ah noocyada ugu fiican adduunka. Waxay si fiican u iftiimisay muuqaalkeeda waxayna muujisay tiro badan oo baabuurta ah si ay u galaan dad badan oo isticmaala. Websaydheeda waxay leedahay muuqaal mawduucyo mug leh oo isku dhafan oo la mid ah noocooda iyo baabuurta. Waa run in WordPress uu leeyahay noocyo badan oo fiilooyin ah, oo aad isticmaali karto si aad u abuurto foomka nala soo xiriir, sawirada sawirada, qaybaha su'aalaha iyo kuwa kale.
3. Muuqaalo warar
Portals News sida CNN iyo MTV News waxay doorteen WordPress si ay u helaan wararka qolalka internetka. Labada gooboodba waxay leeyihiin dhagaystayaal badan oo adduunka ah waxaana loo yaqaannaa qaababka gaarka ah iyo mawduucyada gaarka ah. MTV waxay ku haboontahay habdhaqan wanaagsan waxayna diyaarineysaa mawduuc ay u gaar ah. Sidoo kale waa xaalad la socota CNN. Mawdada ay doorteen waxay muujinayaan sifooyinka asaasiga ah ee naqshadaha casriga ah, halkaas oo sawirada iyo content ay si qalad ah u kala duwanyihiin. Iyadoo WordPress, waxaad si sahal ah u abuuri kartaa goobo isku mid ah waxayna isticmaalaan waxtarka ay u leeyihiin doorashooyinka soo booqda, sanduuqa qoraaga, wadaaga warbaahinta bulshada, iyo shaqo kale. IssueM waa taakuleynta ugu fiican si aad u hesho waxyaalahan.
4. Bulshada online
Waa inaad ka maqashaa jikada dharka leh. Tani waa meesha ay cunniyadu jecel yihiin oo ay wadaagaan cuntooyinkooda internetka oo ay ka hadlaan caadooyinkooda cunida. Boggani wuxuu ku shaqeeyaa dusha sare ee BuddyPress, oo ah il furan oo ah furfurnaan WordPress ah oo horumariyey oo bilaabay Automattic. Fidinta Tani waxay bixisaa wax kasta oo dadku u baahan yihiin si ay u bilaabaan warbaahinta bulshada. Waxaad si sahlan u abuuri kartaa bulshada internetka adigoo isticmaalaya plugin iyo inaad la qabsatid akhristayaal badan iyo kuwo kale.